Kireyntaada Miyay Xiiseyneysaa Moobilka? | Martech Zone
Sida websaydhka, emayl iyo istiraatiijiyad kasta oo kale - suuqleydu waa inay tixgeliyaan mobilada markay soo saaraan, muujiyaan oo ay la wadaagaan waxyaabaha ku jira boggooda, farriimaha iyo marinnada kale. Mid ka mid ah barnaamijyada leh joogitaanka moobiilka waa Pinterest. Codsiga moobiilka ee Pinterest ayaa la soo dejiyey malaayiin jeer wuxuuna sii wadaa inuu yahay madal caan ku ah helitaanka. Xaqiiqdii, 3 ka mid ah 4 booqdayaasha Pinterest waxay ku jiraan aaladda mobilada kalabar dhammaan wadaagga bulshada ee iPads-na waa Pinterest!
Ganacsatada ka faaiidaysanaya madasha iyo ku hagaajinta qalabka mobilada waxay kordhinayaan muuqaalkooda. Soo-booqdayaasha cusub ee moobiilka ee Pinterest u dirtay dukaamada ayaa kordhay 46%!
Tan iyo markii la sii daayay barnaamijka moobiilka ee Pinterest, adeegsiga shabakadda bulshada ee aaladaha moobaylka ayaa cirka isku shareeray marka loo eego nooca webka oo sii kordhaya. Pinterest hadda waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ka qayb qaata taraafikada bogagga wax lagu qoro iyo noocyada waxaana inbadan oo taas ka mid ah ku mahadsan mobile-ka Pinterest. Marka sidee u kordhin kartaa suurtagalnimada in biinankaaga la wadaago oo la riixo-dhexdiisa barnaamijka moobiilka? Halkan waxaa ah hage si guul leh loogu suuq geeyo mobilada Pinterest.
Infographic wuxuu bixiyaa talooyin ku saabsan xadka astaamaha, saamiga muuqaalka, ka faa'iideysiga xarfaha, xiriiriyeyaasha iyo xitaa wuxuu si weyn u xusaa kan Pinterest Mobile Pin Waxaa SDK si loogu daro Badhamada Pin Pin on images ka mobile codsigaaga.
Tags: gifs firfircoonGifsiyadamacruufkabaaritaanka macruufkahagaajinta mobiladanooca mobiladatayadoo mobileku dheji sdk androidku dheji macruufkaku dheji iphoneku dhaji sdkBadhanka Pin-Itxadadka dabeecadda pinterestpinterest xiriiriyeyaasha la riixi karonoocyada pinterestsaamiga sawirka pinterestmobilada pinterestmobilada SDKurint pinterestwaqtiga dhabta ah